Android N: Google Wembula Ikusasa OS - Izindaba Rule
Android N: Google Wembula Ikusasa OS
Early kuqala kwanjiniyela iyatholakala nge kangcono battery-ukuphila nokwenza, ngokushesha lokusebenza usuke, multi-window mode ubusuku
Lesi sihloko osesikhundleni “Android N: Google wembula esizayo ye-OS” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesine 10th March 2016 12.36 UTC
I-Google ukhiphe preview ekuseni kakhulu version elilandelayo kwesistimu yayo yokusebenza mobile - Android N - with uqhekeko-screen eziningi, impilo yebhethri anda nezaziso kangcono.
Ngokuvamile Google idedela preview unjiniyela version entsha ye-Android enkomfeni yokuqokwa lonjiniyela yenkampani, Google I / O, ekupheleni kuka May. It yakhelwe ukuvumela onjiniyela isikhathi sokubona izinhlelo zabo ukwakha izingxenye ezintsha ukusizakala izici ezintsha e-Android ngaphambi kokukhululwa yayo abakhiqizi smartphone ngo-Okthoba.
Kulo nyaka, Nokho, I-Google uqalile izinyanga ezimbili zakuqala, nge developer futhi beta build esikuvumela abasebenzisi avivinye izici ezintsha.
Head of Android, Hiroshi Lockheimer, wathi: "Kuba ekuqaleni kunanini, kulula ukuzama futhi siyakucela ekwandiseni izindlela ngawe kithi unike impendulo. Sifuna ukuzwa kuwe futhi ukuhlela on yesikhulumi nawe - yilokho eyenza Android kunamandla ".
Google uthemba ukuthi preview ekuqaleni kuzovumela ukuhlolelwa mkhulu wasiqashisa uhlinzeke version entsha Android abakhiqizi ngaphambili. Kuthatha izinyanga eziningana abakhiqizi iningi smartphone ukukhulula izinguqulo ezintsha Android Smartphones zabo ekhona. Lokhu kusho ukuthi Smartphones Nexus ye-Google kanye amaphilisi ahlale amadivaysi kuphela egijima inguqulo entsha ye-Android izinyanga.
Lokhu ukuhlola kuqala nesu elisha futhi unikeza i look ngaphambili at yini ukushintsha kakhulu-esetshenziswa mobile uhlelo lokusebenza in the world.
Android N multi-window multitasking eboniswe kwi-Nexus 6P futhi Pixel C. Photograph: Google
Ushintsho enkulu ukwethulwa kwe uqhekeko-screen eziningi umbono esibizwa Multi-Window, okuvumela izinhlelo zokusebenza ezimbili ukuba usetshenziswe on screen eyodwa. Kuyinto Android Abenzi smartphone ezifana Samsung kuye kwadingeka khona iminyaka eminingana, kodwa manje eze kubhakwa Android N.
Izinhlelo zokusebenza kungenziwa run side-by-side noma omunye ngaphezu kwezinye, ne uqhekeko yesikrini usebenzisa isinciphisi central, sifana mode Microsoft uqhekeko-screen siqala Windows 8 in 2012 futhi Apple iOS 9 ezikhishwe ngonyaka odlule.
Izinhlelo zokusebenza ze-Android Akhiwa usebenzisa uyakekela, isihenqo-size format othi uNkulunkulu akaziwa, okusho ukuthi iningi kufanele basebenze ngaphandle kokuguqula ne isici esisha. Nakuba izotholakala kwi Smartphones, isici ngokuyinhloko okuhloswe ngaso kumadivayisi emikhulu kuhlanganise phablets kanye amaphilisi ezifana Pixel C ye-Google.
Ngokushesha lokusebenza usuke
Abasebenzisi ngeke bakwazi kabili badonsa osanda inkinobho zokusebenza ukushintshela kuhlelo lokusebenza esetshenziswa ngaphambilini ngaphandle kokuvula esanda esetshenziswa uhlu zokusebenza, ukurhabisa oshaya phakathi zokusebenza.
Ukulala Kanye zoom
Ukulungiselelwa zoom ivumela abasebenzisi ukwenza izinto esibukweni elikhudlwana nombono acacise izinto noma bamba ngaphezulu kwi screen by zincipha it bonke. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Android N ngeke kusebenze imodi yasebusuku ukuthi amatshe yamaza blue light ukusiza ukuvimbela amafoni ngokugcina abantu ephapheme. Umuntu wesithathu zokusebenza ze-Android baye bakwazi ukwenza okufanayo okwesikhashana usebenzisa obomvu lemifanekiso yizindawo zemishayo, unameke esibukweni futhi kungcono into Apple uye waphawulelwa version wawo olandelayo iOS.
Abasebenzisi ngeke bakwazi ukushintsha usayizi kwemifanekiso umbhalo ngokusebenzisa entsha i-zoom isinciphisi Android N sika, okuyinto kuzosiza labo abadinga kancane ukukhulisa ukubona ukuthi kwenzekani.
The new isaziso umthunzi bayoba irowu phezulu izilungiselelo okusheshayo, okuyinto umsebenzisi kungashintsha, nezaziso iqembu. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Android N kuyofika ne ikhono izaziso eqenjini labantu abathile evela lokusebenza olulodwa ndawonye. Izinhlelo zokusebenza Eziningana kakade ukwenza lokhu, kuhlanganise lokusebenza Gmail ye-Google, okuyinto iqoqa imiyalezo ndawonye njengoba bengena futhi ivumela abasebenzisi ukwandisa kubo ukufunda izaziso noma abayekise ukuba omunye.
sici okusheshayo-impendulo ye-Google, ezikhona ngaphakathi ku-Hangouts yayo futhi isilayezi imiyalezo zokusebenza ne-Android Wear, lizophinda libe isici ejwayelekile ngaphakathi Android N, sivumele abasebenzisi Bash out ngezimpendulo imilayezo ngokuqondile kusukela umthunzi isaziso ngaphandle kokungena lokusebenza.
Le nguqulo entsha ye Doze kuzosiza yelule ukuphila kwebhetri lapho isikrini sivaliwe. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Android 6.0 Marshmallow wenza intuthuko enkulu kahle ibhethri usebenzisa isici ebizwa Doze, okuyinto ubeke smartphone noma ithebulethi kusimo aphansi amandla futhi bawuthatha umbuso Friend phezu yini eyayingenziwa uvuse idivayisi lapho isikrini kwaba off futhi awuzange ezihambayo.
Lokhu kwakusho ukuthi lapho ifoni wabekwa etafuleni hhayi wathinta isikhashana ke isikhathi eside kakhulu impilo yebhethri, izinto nokukhawulela ezifana nokufinyelela internet ukusetha ngezikhawu.
Android N udlulisela leso sici ukusebenza lapho isikrini sivaliwe kodwa ifoni siyahamba - ephaketheni noma esikhwameni ngokwesibonelo – okumele libe nomthelela omuhle impilo yebhethri.
ohlabayo, Android ngokushesha
Android N Ubuye inguqulo entsha yalo isikhathi sokusebenza Java-Android (art), okuyisona esiphethe zokusebenza ezifakiwe efonini. Kuyinto kubelula futhi kusebenze kahle, okusho izinhlelo zokusebenza ngeke ukufaka futhi ubuyekeze ngokushesha ngaphandle kokudinga inkathi nokwenza. Lokhu kufanele ukunciphisa kakhulu isikhathi edingekayo ukufaka izibuyekezo ze-Android kanye nezinye ngcono.
Project Svelte ye-Google futhi abesebenza ekunciphiseni ubukhulu nesisindo Android kangangokuba kuthatha isikhala sokubeka kancane futhi ungagijima kumadivayisi-amandla aphansi, okumele kusho isikhala esengeziwe zokusebenza kanye nabezindaba.
Onjiniyela ngifuna ukuzama inguqulo ye-beta-Android N can ukubhalisa idivaysi ye-Nexus ne-Google ukuvuselela ngomsakazo, futhi ungabuyela inguqulo yakamuva ye-Android 6 Marshmallow ngendlela efanayo.
Labo akasebenzisi Amadivayisi e-Nexus ye-Google kuzodingeka silinde kuze kube nomkhiqizi smartphone yabo ukuthola Android N ehlobo bese push it out kumadivaysi, okuyinto cishe uyoba 2017.
Android 6.0 Marshmallow: 21 amathiphu ukuze balukhulume update OS ye-Google
25809	5 Alphabet, Android, Isigaba, Google, Omakhalekhukhwini, Izindaba, Phablets, Samuel Gibbs, Smartphones, Software, amakhompyutha Tablet, Technology
← 7 Amacala ezingalindelekile ukusetshenziswa for Reality Virtual Ingabe Kukhona Ukuphila on Mars? →